अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत शेर्पामाथीको अभियोग र प्रमाणको चिरफार – Mission Khabar
अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत शेर्पामाथीको अभियोग र प्रमाणको चिरफार
मिसन खबर २० मंसिर २०७५, बिहीबार १८:०९
समाचार टिप्पणी । अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथी उनकै चालक र भान्सेले पैसा लिएर आफुलाई अष्ट्रेलिया ल्याएको आरोप लगाएको बिषय अहिले चौतर्फी चर्चा बनेको छ ।
नेपालस्थित राष्ट्रिय टेलिभिजन न्युज २४ को चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनताबाट सार्वजनिक भएको यो रहश्य अहिले भुसको आगोसरी फैलिरहेको छ । स्वभाविक रुपले अष्ट्रेलियाका नेपाली समाजमा यसले बढी तरंग पैदा गरिरहदा नेपालस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई गम्भिर रुपमा लिन र छानविन अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाजिक संजालमा राजदूतमाथी लागेको आरोपको सत्यतामाथी बहस भैरहदा मैले अभियोगको प्रमाण केलाउने प्रयास गरेकोछु ।
प्रमाण नम्बर एक– तमसुक
यसलाई राजदूतले चालक र भान्से वाङ्छु शेर्पासंग पैसा लिएर अष्ट्रेलिया ल्याएको पुष्टी गर्ने आधार बनाइएको छ । वाङ्छुले रबि लामिछानेसँग लाईभमा राजदूतका श्रीमान् र आफुबिच अष्ट्रेलिया लैजान तिर्नुपर्ने ६४ लाखको तमसुक भएको दावी गरेजस्तै उनको मोवाइलमा यस्तो तमासुक सुरक्षित छ । एक हरफको तमसुकमा घरायसी लनदेनका क्रममा वाङ्छुले ६४ लाख रुपैया ४ वर्षमा राजदुतका श्रीमानलाई तिर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, साछी बिनाको तमसुकमा वाङ्छुको हस्ताक्षर भएपनि राजदुतका श्रीमानको कुनै हस्ताक्षर छैन । वाङ्छु स्वयम कागज गर्ने बेला राजदुतका श्रीमान् नेपालमा भएकाले हस्ताक्षर गराउन नपाएको बताउँछन् ।
राजदूतका चालक\_ भान्से वाङ्छु शेर्पा
घरायसी लेनदेनको यति ठुलो रकम दाखिला गरिएको तमसुकमा पैसा दिने र साछीको हस्ताक्षर नहुनुले यसको बैद्यानिकता कसरी मापन गर्ने यो आफैमा छानविनको बिषय बनेको छ । आरोप लगाउने वाङ्छु स्वयमसँग पनि भेट्ने मौका पाएकाले भेटको प्रशंग अर्को संस्करणमा खुलाउनेछु ।
प्रमाण नम्बर दुई -एसएमएस र म्यासेन्जर
राजदुतमाथीको आरोप पुष्टी गर्न प्रयोग गरिएको अर्को प्रमाण हो यो । फेसबुक र म्यासेजमा भएको कुराकानीलाई आरोपकर्ताले यसरी पेश गरेका छन् । मोवाईलको स्क्रिनसटमा सुरक्षित मेसेज वाङ्छु र राजदुतका श्रीमान् बिचको थियो । यसमा कुनै संकै भएन । तर, यहाँ ३२ लाख, ६४ लाख मैले दिएको भन्दै वाङ्छुले एकोहोरो म्यासेज पठाएको देखिन्छ । पैसा र अरु व्यक्तिको बारेमा वाङ्छुले पठाएको म्यासेजमा राजदुतका श्रीमानले ‘तमसुकमा कसैले हस्ताक्षर गरेको छैन । त्यो फेक हो । चिन्ता छैन । किन भागेको ? क्लियर गरेको भए हुन्थ्यो भनेर जवाफ पठाएका छन् । यसले पनि लेनदेन हो वा होइन् ? अनि के को भन्ने स्पष्ट गरेको छैन ।
अर्को पक्ष एसमएसमा वाङ्छुकी श्रीमतीलाई अष्ट्रेलिया ल्याउने भन्दै दोहोरो कुराकानी भएको भने देखिन्छ । जसमा राजदुतका श्रीमानले वाङ्छुलाई श्रीमतीको छिटो मेडिकल र पुलिस रिपोर्ट बनाउन सुझाएका छन् । त्यसपछिको अर्काे म्यासेजमा राजदुतका श्रीमानले भनेका छन्–हामीले तिम्रो श्रीमतीलाई ल्याएर सहयोग गर्न लागेपनि तिमी दुतावासबाट भागेकाले ल्याउन नसकिएको भन्दै वाङ्छुसंग गुनासो पोखेका छन् । यो कुराकानीले वाङ्छुको श्रीमती अष्ट्रेलिया आउने तयारीमा रहेको बुझिएपनि पैसा असुलीको स्वतन्त्र पुष्टी गर्ने आधार खुलेको छैन ।
प्रमाण नम्बर तीन – बैंक खाता
वाङ्छुले बैक खाता बारे पनि कुरा राखेका छन् । राजदुतको श्रीमानको बैंक खाता समेत सार्वजनिक गरिदिएका छन् । तर, राजदुतले सिड्नीमा केही संचारकर्मी र समाजिक अगुवासंग भेटेर आफ्नो बैंक खाता र अन्य आरोपको स्वतन्त्र छानविन गर्न आफुले संघिय प्रहरीलाई सघाएको दावी गरेकी छिन् । वाङ्छुले सिंगापुरबाट मगाएको भनिएको पैसा राजदुतले खाता मार्फत वा नगद रुपमा नलिएको छानविनबाट आफै खुलीसकेको छ । यो पनि दरिलो प्रमाण बन्न सकिरहेको छैन ।
त्यसो त, शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पछि नपर्ने नेपाली भिआईपीले यो काण्ड घटाएनन भनेर विश्वस्त भैहाल्ने अवस्था भने छैन । तर पदको दुरुपयोग गर्नेको भण्डाफोर गरिरहदा कानुनी कठघरमा उभ्याउन सबैभन्दा महत्वपुर्ण र आवश्यक भनेको प्रमाण नै हो । अहिले धेरै पेशा र वर्गका नेपालीहरुको समिश्रण रहेको अष्ट्रेलियाली नेपाली समाजमा एउटै कुराको चर्चा परिचर्चा छ, त्यो हो अष्ट्रृलियाका लागि नेपाली राजदुत शेर्पामाथीको अभियोगको सत्यता र रहश्य के हो ?
हुनत, अष्ट्रेलियन कानुन र सम्मानित अदालतमा वाङ्छु विरुद्धको मुद्दा विचाधिन भएकाले यस बारेमा थप टिकाटिप्णीको अर्थ नहोला तर खोजमुलक पत्रकारिताको पेशागत धर्मले चुप लाग्न दिदैन । यहाँ दुबै पक्षले खुलाएका तथ्य, खोजिएका प्रमाण र आधार केलाउने प्रयास गरिएको छ । यहाँ कुटनीतिक दायरा अनुसन्धानका लागि खुल्ला भैसकेको छ । यता, सिड्नीमै राजदुत शेर्पाले संचारकर्मी, सामाजिक अगुवा, एनआरएनका पदाधिकारीलाई भेटेर आफुलाई जवरजस्त फसाईएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले आफूमाथीको आरोप छानविन गर्न अष्ट्रेलियाको संघिय प्रहरी र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफुले कुनै अवरोध नगर्ने र एक वर्ष अघि नै पत्राचार गरेको विवरण नै खुलाएकी छिन् । कुटनीतिक मर्यादा अनुसार राजदुतको बैक खाता लगायत छानविन गर्न प्रहरीलाई अप्ठ्यारो नहोस भनेर डिप्लेम्याटिक युमिनिटी ओपन गरिदिएको उनको दाबी छ ।
दुतावासको चोरी, संघिय प्रहरीको छानविन र ब्रिजिङ भिषामा रहेका वाङ्छु आफै पनि विवादमा फस्दै आएका छन् । गत वर्ष दुतावासबाट ३ तोला सुन चोरी गरि फरार रहेको सुचना दुतावासको फेसबुकमा सार्वजनिक भएको थियो । तर, वाङ्छुले भने चोरेर नभई संघिय प्रहरीसंग गएको बताउँदैआएका छन् । संघिय प्रहरीले वाङ्छुको आरोपमा सात महिना लामो अनुसन्धान गरेको तथ्य एक वर्ष अघि राजदुतले कुटनैतिक घेरा खुल्ला गरेको पत्रबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । छनविनबाट सफाई पाएका वाङ्छु माथी प्रहरी र परराष्ट्रले दुतावास वा राजदुतसंग सम्बन्धीत विषयमा केही पत्रचार वा आपत्ति जनाएको पनि कहि कत्तै देखिदैन ।
ब्रिजिङ भिषा पाएकोमा दंग भएका वाङ्छु अहिले आफै भनिरहका छन् – श्रीमतिलाई जेलबाट निकाल्न मात्र मैले यो कुरा मिडियामा ल्याएको हुँ । यसले यो आरोप र विवादलाई झनै रहश्यमय बनाइदिएको छ ।
मैले यहाँ वाङ्छुकी श्रीमती जेल गएको प्रशंग पनि जोड्न आवश्यक ठानेको छु । राजदुत, उनका श्रीमान् र वाङ्छुबिच आर्थिक लेनदेनको ठोस आधार नदेखिएपनि वाङ्छुकी श्रीमती र सिंगापुरमा बस्ने एक युवाबिच भने लेनदेन भएको बैकिक रेकर्डबाट खुलेको छ । तीनै युवाले आफुलाई अष्ट्रेलिया लैजाने भन्दै वाङ्छुले पैसा लिएको प्रमाण सहितको उनकी श्रीमती बिरुद्ध उजुरी र बयान दिएपछि जेल परेको बताइएको छ । यसबारे वाङ्छु विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
यहाँ कसैलाई दोषी करार गरेर कसैलाई सफाई दिनभन्दा पनि आरोपमाथीको प्रमाण र आधार पुष्टी गर्ने प्रयास गरिएको छ । बिवादको अन्तिम किनारा लगाउने छुट उजूरीको छानविन गर्नेलाई भएजस्तै यो घटनाको प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने स्वतन्त्रता तपाई सबैमा खुल्ला छ । अष्ट्रेलियामा गोप्य रुपमा गरिने भिडियो वा अडियो रेकर्डलाई गैरकानुनी मानिनेहुँदा दुई पक्षबीचको कुराकानी र संवादलाई यहाँ आधार मात्रै मानेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।
हाल अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्ने टिप्पणीकार सरल गुरुङसँग नेपालको राष्ट्रिय टेलिभजन मार्फत १० वर्ष लामो अपराध र खोजमुलक रिपोर्टिङ गरेको अनुभव छ भने उनी अझै अष्ट्रलियामै बसेर पत्रकारितामा क्रियाशिल छन् ।
क्याटेगोरी : खोज / मिसन, देश / प्रदेश, विश्व / विविध